Ogaden News Agency (ONA) – Q3xaad Taariikh Halganeedka CWXO – iyo Dagaalkii CirJiidh
Q3xaad Taariikh Halganeedka CWXO – iyo Dagaalkii CirJiidh
Ugu horeyn majirin wax aan ku qiimayn karo niyadayda maalinkii nala yidhi dhaqaaqa. Farxada qosolka iyo islawaynada. Kalina kuma ahayn midan ee qof walba oo ciidankaasi kamid ahaa waxay ahayd mid ay ila wadaagayeen. Aan bal isku dayo inaan tuujiyo xasuustayda anigoon halkan ku soo koobi karin wax walba oo markaasi dhacay siday ahaayeen.
Hawlgaka CIRJIIDH waxa uu bilaabmay 4 bilood kahor wakhtiga uu fulay. CWXO ee ku sugnaa dugsiga tababarka ee SAYID C/WALI waxay ka ruqaansadeen goobtoodii tababarka oo ay mudo ku sugnaayeen 20/04/2006. Ciidanka goobtaasi ka hayaamay waxay ahaayeen 2ba Urur oo ku hubaysnaa qaybaha kala duwan ee hubka loogu talagalay ciidamada lugta amaba ay jabhadi qaadato. Waxaa uu kusii hakaday laba meelood oo dhexda ah; xogtan oo ah xog ciidan daraadeed ayaa magaca goobta 1aad waxaynu ku daynaynaa oo kaliya (goobta 1aad). Waxa uu ciidankaasi soo gaadhay taariikhdu markay ahayd 26/04/2006 waxuuna ku sugnaa G/1aad ciidankaasi ilaa iyo 27/07/2006.
Hadaba Amin aanu salada maqrib tukanay oo aanu markaasi ku mashquulsanahay repot-ka ciidan ee lala soo dheelmaday iyo midaka lagu waabariisan lahaa (Hadii Allaha awooda lihi ogalaado) ayaa waxaa marqudha soo yeedhay oo maamulkii ciidanku isugu yimaadeen report horleh oo ah in ciidanka oo markaasi ahaa Urur iyo Badh ay diyaar garoobaan, subaxnimo horena ay kalahayaan (Hadii Allaha awooda lihi ogalaado). Maqalka wajiibkan oo in badan ay ciidamadani sugayeen waxay ahayd wax ay dhagahaygu maqlan tan iyo maalintii aan garaadsaday midii iigu farxada badnayd iigu wanaagsanayd ee aan xusuusto taarikhda, in badana way ku soo noq-noqotaa maalinta qalbigayga. Kadib waxaan u ruqaansanay oo uu Ciidankii gaadhay goobta labaad (Goobta 2aad) taariikhdu markay ahayd 28/07/2006. Goobtan labaad waxay ku sugnaayeen ciidankaasi laba maalmood iyo habeen kaliya. 30/07/2006 waxay soo istaageen ciidankii loogu tala galay inay fuliyaan Hawlgalkii lamagac baxay Cirjiidh, oo 2badii Urur ah goobta lagu magacaabo Caleen oo ka mid ah dagmada Shilaabo ee gobolka Qorahay.
Marka intaasi aan kaganimaadno taariikha iyo dhaqdhaqaaqa ciidanka kahor hawlgalka, aan wax idiinka tilmaamo sawiraka, qaabka iyo qiimaha ciidanka. Hawlgalka Cirjiidh waxa uu ku soo hagaagay wakhtigii ay dhaceen dagaalada lagu jabiyay ciidanka gumaysiga Ethiopia, gaarahaan 10 maalmood kadib labadii dagaal ee Quusiye iyo Balisareedo. Wakhtigan waxaa ciidamada gumaysiga Ethiopia ee ka hawlgala dalka Ogadenia kor loo qaaday oo ay gadheen ilaa iyo 50 kun oo askari. Ciidankan gumaysiga Ethiopia ee cadadkaas ka kooban ayaa loogu tala galay in ay ka qaybqaataan hawlgalkii inta badan shacabka S/Ogadenia ay u yaqaaneen (Mulgeeta) macnihiisuna ahaa marka Somali laga dhigo Shanlo; waxaa hawlgalkan ciidmada Wayaanuhu ugu tala galeen in geed iyo geed loo hoos istaago ciida barakaysan ee Ogadenia.
Hawlgalka Cirjiidh waxa uu ahaa midka is-kaba raaciyay riwaayada hawlgalka uu gumaysiga ula baxay Mulgeeta oo lagu maaweelinayay in badan oo ka mida gumaysatada Wayaanaha oo mar uun ku naaloonayay in ay soo afjaraan kacdoonka gobanimodoon ee shacabka S/Ogadenia si-raaxo lehna ay ku joogaan ciida daahirka ah ee Ogadenia.
Dhanka kale Ciidanka WXO ee fuliyay hawlgalka Cirjiidh waxay ahaayeen ciidan tababaran oo kadhisan dhinacyada: cidaan, siyaasad, wadaniyad, daraasadaynta xaalad cadaw iyo mid deegaanba. Waxayna ahaayeen kuwo dihin marka aad ka fiiriso dhinacyada mooraalka, ku-kakanida cadawga, oo u diir-naxaya amba u jiidh-naxaya shacabka S/Ogadenia iyo waliba iyagoo aad ugu heelana mar uun in ay si-buuxda uga qaybqaataan halganka shacabiga ah ee wakhtiga dheer ka socday dalka Ogadenia una adeegsadaan khibrada ciidan ay korarsadeen tababarkii dugsiga SAYID CABDI WALI.
Hadaba aynu dhex-mushaaxno dhulka carafta iyo bilicda wanaagsan ee Ciidankii Cirjiidh uu dhex galay iyagoo Allihii abuurtay mooyee cidkale aan uga waabanaynin. Ciidanka waxa uu ka dhaqaaqay isagoo istaraatijiyad dagaal ku socda Tuulad Caleen waxuuna u jihaystay dhankaa iyo Tuulada hada lagubay ee Qamuuda taariikhdu marakay ahayd 30/07/2006. Wakhtigan waxay saacadu tilmaamaysaa 10:30 barqin-nimo kadib kulan ay yeesheen Abbaanduulaha CWXO N/H Cabdikariin Sheikh Muuse iyo Taliskii Ciidanka fulinaya Hawlgalka Cirjiidh, daqiiqado kahor wakhtigaasi aan kor ku soo sheegnay. Markii uu dhamaaday kulankankaas, CWXO oo marwalba ah kuwo diyaar-garaw iyo feejignaan dheeraada Ilaahay ku manaystay, waxay u jihaysteen iyagoo madaxyo tirabadan ah dhankii qorshu ahaa. Markaad dhawrto waxaa kuu muuqanayay wiilal iyo gabdho wata dirays isku mid ah, leh nidaam ciidan oo si habaysana u wada socda. Hadaad dhagta u sii raaricisana waxaad maqlaysay sawaxanka jaanqaadkooda oo ku dareensiinaya culayska ciidanka meesha socda.
Ciidanka waxa uu dhex qaadayay intiisa badani dhul kaymo ah, mararka qaarna waxaa uu marayay dhul daleed ah iyagoo aan talaabo kala horaynin kala hadhin oo aad moodo in uu hada ka dhaqaaqay rugtii ay daganaayeen. Naftood-hurayaashii hawlgalkasi Cirjiidh fuliyay intay ku jireen socdkan waxay marba sii marayeen bulsha waynta S/Ogadenia ee reer guuraaga ah oo deegaanadaasi ku dhaqan iyagoo abaabul, dhoola-tus, kawarqaadsho IWM ay dhex marayeen. Waxaa sidoo kale xusid-mudan qaabkii diiranaa ee ay u soo dhawaynayeen hooyooyinka, gabdhaha, caruurta, dhalinyarada, iyo Odayaasha S/Ogadenia markay isha saaraan ciidankaasi. Waxyaabah aanan marnaba ilaawaynin waxaa ka mid ahaa Mush-xaradii (elalaaskii) ay ku soo dhawaynayeen gabdhaha iyo hooyooyinka S/Ogadenia ciidankaasi. Waxaan sidoo kale arkayay da’yar wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo ciidankaasi dhinacyada iyo xaga danbaba kala ordayay jiirikaano iyo caagada biyo ah. Sidoo kale dhalinyarada koox kooxda u socota ee aan kamid noqono CWXO ku ilmaynaysay iyana xisaab malahayn. Culayska hubkii aan wadanay iyo socdkaba waxaanu ku ilaawaynay waa wajigii iyo farxadii diiranayd ee aan kala kulanay Bulshada S/Ogadenia.
Ciidankii socod raaxa leh kadib waxa uu Tuulada Qamuuda korkeeda yimid barqanimadii danbe. Wakhtigaasi waxaa tuulada Qamuuda ku sugnaa ciidan Wayaana ah oo gaadhaya ilaa 200 oo askari. Sahankii Hawlgalka Cirjiidh oo ka soo horeeyay daraadeed waxaa naloo sheegay in ciidankaasi ku suganyahay Tuulada. Waajibaadku wuxuu ahaa in aan marnaba laga leexanin wixii hor istaaga Hawlgal ka mida hawlaha Ciidanka JWXO. Hadana hawlgalka Cirjiidh waxa uu ahaa mid watay dhiranaan, geesinimo iyo carcar aan la qiyaasi karin. Kulan ay yeeshiin xubnihii sahanka ciidanka ahaa iyo taliska waxaa lagu dajiyay shax dagaal oo dag-dag ah.
Waxaa markiiba meeshaasi u dhaqaajiyay ciidan lix madax ah halka uu madax kuusani isna goobtaasi ku hadhay amaba ka dhigtay goobtii laga hogaamin lahaa dagaalka. Intii ciidankaasi uusan gaadhin Tuulada Qamuuda waxaa 7 gaadhi ku fakaday ciidankii wayaanaha ahaa ee ku sugnaa tulada sababta oo ah waxay ka warheleen ciidan xoog leh inuu ku soo fool leeyahay oo ilaa shalay deegaanka ku jiray iyagoo kor ilaa hoos dareensanaa in ciidankani uu yahay mid aan loo barbac dhigi Karin. Baqadoodii iyaga oo aan dhag laqabto lahayn ayaa waxay isku shubeen Magaalada Qabridahare ee xarunta gobalka Qoraxay. Midan waxay cabsi wal-wal hor leh ku noqotay ciidankii fadhiyay iyo wixii ay u warameen ciidankan khal khalsan ee cagaha wax kasoo dayay.
Naftood-hurayaashii fulinayay hawlgalka Cirjiidh markii ay arkeen in ciidankaasi ka fakadeen waxay dib u qiimeeyeen qorshihii iyo nidaamkii socodkooda, waxaana soo baxday in gumaysigu isna qorshe la iman-doono. Hawlgalka Cirjiidh oo ahaa mid sidii loogu talagalay u fulay wuxuu ka bilaabmay Tuulada Qamuda. Qorshihii 2aad ee ciidanka, waxaa loo qaybiyay 6 madax (Hormo) kadib waxaa lakala siiayay deegaanka ku wajahan oo ahaa degaan oomana ah, ciduna ay ahayd ceel fadhiisi wakhtugun uu ahaa wakhti ay dayr bil ka dhimantahay, guga la soo daba marayna uusan ahayn mid fiican. Jihooyunkii ay ahayd in loo socdo ayuu madax waliba u dhaqaajiyay;
Madaxa 1aad waxa uu uga dhaqaaqay goobtaasi Bari Ilaa Koonfur Bari oo ahayd jihada hawlgalkiisa. Madaxa 2aad waxa uu uga dhaqaajiyay deegaanka Goglo ayuu ka jiidhay Koonfur. Madaxa 3aad waxa uu ka maray badhtanka deegaanka Goglo isagoo cagta sii mariyay deegaanada Dhuure, Buubi & Waab. Madaxa 4aad ciidankani waxay isugu jireen 3 madax, waxaana qorshuhu ahaa in ay kawada maraan dhanka Waqooyi deegaanka Goglo, kadibna laba madax oo wada socdaa ay u gudbaan Galbeedka Ogaadeenia.
Akhyaarta sharafta leh qaybtii 1aad ee barnaamijkeenan intaas ayay ku dhantahay. Qaybaha dambe ee barnaamijkeenan ayaan ku kala qeexi-doonaa waxii lagu danbeeyay iyo sidii uu u fashiliyay Hawlgalkii Cirjiidh Duulaankii ciidamada gumaysigu soo qaadeen ee Mulgeeta.
La soco Qaybaha hadhay.
Qore:- Shamsadiin Cumer (TAKHAL). Waxaanan kamid ahaa Naftood-hurayaashii fuliyay Hawlgalkii Cirjiidh.
waa sheeko macaan in sha alaah dhamaad keedaan eegi doonaa